Gudaha Inuction kuleylka kululeyaasha ee biraha leh nidaamka kuleylka kuleylka badan
Bogga ugu weyn / Codsiyada / Kuleylka kuleylka / Kuleylka kuleylka kuleylka ah ee birta birta ah
Category: Kuleylka kuleylka Tags: qaboojiyaha gudaha, kuleyliyaha gudaha gudaha, kuleyliyaha gudaha ee birta, induction kululaynta lnner, kululaynta kululaynta birta gudaha, lakabka kuleylinta lakabka birta, kuleylka gudaha kuleylka
Induction Iskudhiga Hareeraha Qashinka Birta leh Qalabka Isgaadhsiinta Heerka sare
Ujeeddo Khadadka birta ah ee kuleylka ah ee madaxa mashiinka si looga saaro santuuqa aluminium.
Qalabka birta, 80 mm x 190 mm (3.1 ee x 7.5 gudaha.)
Heerkulka 650 ºC (1202 ºF)
Joogitaanka 60 kHz
Qalabka DW-HF-25kW nidaamka kuleylka kuleylka, oo lagu qalabeeyay madaxa shaqada fog oo leh hal 2.6 oneF capacitor.
Qalab kuleyliyaha kuleylinta ee loogu talagalay loona sameeyay si gaar ah codsigan.
Geedi socodka Xirmooyinka 10 leexleexasho (bore) oo gudaha ah ayaa loo isticmaalaa in lagu diiriyo safka birta illaa 650 ºC (1202 ºF) ugu yaraan laba daqiiqo
Cadaadis ayaa la marinayaa maqaarka aluminium ee banaanka si ay uga furto birta. A afar meel gariiradda waxaa loo isticmaali karaa in lagu kululeeyo 4 sadarro isku mar.
• Toos u dhig kuleylka tooska ah si ay si dhakhso leh oo nadiif ah ugala baxaan aluminium. Dahaarka aluminiumka dib ayaa loo warshadeeyay loona isticmaalay si loo yareeyo qashinka iyo goynta kharashyada.
aluminiinka kuleylka kuleylka
Induction Isugeynta Aluminium